पर्सामा ३० प्रतिशत धान रोपाइँ सम्पन्न « dainiki
१६ असार २०७८, बुधबार १७:३६
पर्सामा ३० प्रतिशत धान रोपाइँ सम्पन्न
१६ असार, वीरगञ्ज । वर्षा ऋतुको आगमनसंगै मनसुनको झरीमा रमाउँदै हिलाम्य खेत, हाथभरी धानको बेर्ना लिएर एकहुल महिला असारे गीत गाउँदै धान रोप्नमा व्यस्त छिन् । अकाशभरी छिटपुट पानी परिरहेको छ । ती झरीमा महिलाहरु आफ्नो कोकिल कण्ठले सुरिलो गीत गाउँदै धान रोप्नमा व्यस्त देखिन्छ । यस्ता दृश्यले जो कोहीलाई पनि आफूतिर आकर्षित गरिरहेका छन् ।
मध्यतराईको अन्नको भण्डार मानिने पर्सा, बारा र रौतहटलगायत जिल्लामा यो वर्ष समयमै मनसुन प्रवेश गरेपछि किसान गण्डक नहरको पानीको भर नपरी अकाशे पानीले समयमै वेर्ना लगाएका छन् । जगरनाथपुरका किसान हरिदेवले गण्डक नहरमा समयमा पानी नआउँदा मनसुने पानीको भरमा समयमै बेर्ना लगाइएकाले यसपाली धानको उत्पादन राम्रो हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
केही दिन यता मनसुन सक्रिय भई पानी परेकाले समयमा धानको बेर्ना लगाएपछि यसपाली मानो रोपेर मुडी उव्जाउने किसानको सपना साकार हुने देखिन्छ । उत्पादन राम्रो हुने देखेपछि यहाँका किसान खुशी भएका छन् । किसान मनोज साहले भन्नुभयो, “मनसुनी वर्षाका कारण यो वर्ष सोचेभन्दा बढी उत्पादन हुने हुँदा किसान खुशी देखिएका छन् ।”
पर्सामा हालसम्म ३० प्रतिशत धान रोपाइँ सम्पन्न भएको छ । समयमै धान रोपाइँ सम्पन्न हुँदा यो वर्ष जिल्लामा २५ प्रतिशतले उत्पादन बढ्ने अनुमान गरिएको कृषि ज्ञान केन्द्र पर्साका अधिकृत सुरेश प्रसादले बताउनुभयो । पर्सामा कूल ४६ हजार ६ सय हेक्टर ,बारामा ६० हजार ४३० हेक्टर तथा रौतहटमा ३८ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा धान खेती हुँदै आएको छ ।
यसवर्ष समयमै मनसुनी वर्षा भएकाले तराईका जिल्लाहरुमा चाडै नै धान रोपाइँ सकिने र यही अवस्था रहेमा उत्पादन पनि राम्रो लिन सकिने विश्वास सम्बन्धित जिल्लाका कृषि ज्ञान केन्द्रले जनाएको छ । उर्वरभूमि, पर्याप्त जनशतिm र सिंँचाइको ठूलो स्रोत हुँदाहुदै पनि विगतका वर्षहरुमा पानीको अभावका कारण समयमा धान रोपाइँ हुन नसक्दा उत्पादनमा कमी आउने गरेको थियो । रासस
प्रकाशित मिति: १६ असार २०७८, बुधबार १७:३६
दार्चुला घटनामा भारतसँग औपचारिक विरोध जनाउन एमालेको माग
१९ साउन, काठमाडौँ । प्रमुख विपक्षी नेकपा एमालेले भारतीय सीमा सुरक्षा बलले तुइन काट्दा जयसिंह धामी महाकाली नदीमा खसेर बेपत्ता भएकाे भन्दै भारतसमक्ष औपचारिक विरोध
यस्ताे छ शिल्पाको पति राज कुन्द्रा पक्राउ पर्नुको वास्तविक कारण
आज पनि मैलुङ खोलाको आईपीओमा आवेदन दिन सकिने, कति बजेदेखि कति बजेसम्म ?
एसएसबीले तुइन काटेर वेपत्ता भएका जयसिंहका बारेमा समाचार नलेख्न सरकारको आदेश
कर्णालीका चार सांसदको पद गुमेपछि माधव नेपाल अध्यक्ष ओलीसँग भेट्न तयार
प्रकाश ज्वालासहित एमालेका चार सांसदको जागिर चैट, सर्वोच्चबाट कारबाही सदर
पूर्व मन्त्री भानुभक्त ढकालको नेतृत्वमा एमालेको पर्यटन विभाग, यी हुन सदस्यहरू
प्रचण्डले देउवालाई हुन्न भन्न लगाएपछि माओवादीको बैठक नारायणकाजीको घरमा
तुईन विस्थापनमा के गरेका थिए केपी ओलीले ? यस्तो छ वास्तविकता
१४ साउन, वीरगञ्ज । बङ्गलादेशबाट खरिद गरिएको ५२ हजार मेट्रिकटन युरिया मल नेपाल आइपुगेको छ
पानी नपर्दा बाँकेमा धान रोपाई रोकियाे
२४ असार, काठमाडाैँ । बाँकेमा एक साता देखि पानी नपर्दा धान रोपाई रोकिएको छ ।
तनहुँमा रोपिसकेको धान खोलाले बगायो
१७ असार, दमाैली । मङ्गलबार रातिदेखि परेको अविरल वर्षाका कारण तनहुँको म्याग्दे खोलामा आएको बाढीले धानखेत
देशभर २७ प्रतिशत धान रोपाइँ
१५ असार, काठमाडौँ । धान रोपाईं हुने क्षेत्रफलमध्ये देशभर करिब २७ प्रतिशतमा वर्षे धान रोपाइँ